OldSafeCoin စျေး - အွန်လိုင်း OLDSF ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို OldSafeCoin (OLDSF)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ OldSafeCoin (OLDSF) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ OldSafeCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ OldSafeCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
OldSafeCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OldSafeCoinOLDSF သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.171OldSafeCoinOLDSF သို့ ယူရိုEUR€0.145OldSafeCoinOLDSF သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.131OldSafeCoinOLDSF သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.156OldSafeCoinOLDSF သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.52OldSafeCoinOLDSF သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.08OldSafeCoinOLDSF သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.78OldSafeCoinOLDSF သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.637OldSafeCoinOLDSF သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.227OldSafeCoinOLDSF သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.239OldSafeCoinOLDSF သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.77OldSafeCoinOLDSF သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.33OldSafeCoinOLDSF သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.921OldSafeCoinOLDSF သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹12.84OldSafeCoinOLDSF သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.28.95OldSafeCoinOLDSF သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.235OldSafeCoinOLDSF သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.262OldSafeCoinOLDSF သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.34OldSafeCoinOLDSF သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.19OldSafeCoinOLDSF သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥18.26OldSafeCoinOLDSF သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩203.42OldSafeCoinOLDSF သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦66.21OldSafeCoinOLDSF သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽12.51OldSafeCoinOLDSF သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.69
OldSafeCoinOLDSF သို့ BitcoinBTC0.00001 OldSafeCoinOLDSF သို့ EthereumETH0.000447 OldSafeCoinOLDSF သို့ LitecoinLTC0.00315 OldSafeCoinOLDSF သို့ DigitalCashDASH0.00189 OldSafeCoinOLDSF သို့ MoneroXMR0.00193 OldSafeCoinOLDSF သို့ NxtNXT13.37 OldSafeCoinOLDSF သို့ Ethereum ClassicETC0.0253 OldSafeCoinOLDSF သို့ DogecoinDOGE49.48 OldSafeCoinOLDSF သို့ ZCashZEC0.00208 OldSafeCoinOLDSF သို့ BitsharesBTS5.28 OldSafeCoinOLDSF သို့ DigiByteDGB5.49 OldSafeCoinOLDSF သို့ RippleXRP0.609 OldSafeCoinOLDSF သို့ BitcoinDarkBTCD0.00591 OldSafeCoinOLDSF သို့ PeerCoinPPC0.569 OldSafeCoinOLDSF သို့ CraigsCoinCRAIG78.13 OldSafeCoinOLDSF သို့ BitstakeXBS7.31 OldSafeCoinOLDSF သို့ PayCoinXPY2.99 OldSafeCoinOLDSF သို့ ProsperCoinPRC21.51 OldSafeCoinOLDSF သို့ YbCoinYBC0.00009 OldSafeCoinOLDSF သို့ DarkKushDANK55.03 OldSafeCoinOLDSF သို့ GiveCoinGIVE371.38 OldSafeCoinOLDSF သို့ KoboCoinKOBO39.06 OldSafeCoinOLDSF သို့ DarkTokenDT0.158 OldSafeCoinOLDSF သို့ CETUS CoinCETI495.24